Shir Lagu Qiimaynayay Unug Aas Aasiyada Iyo Unug Hoosaadyada Ee XDSHSI Oo Loo Qaybtay Maanta Shaqaalaha Wakaalada Qurba Joogta DDSI. - Cakaara News
Jigjiga(CN) Isniin.03.Nov.2014, si loo gaadho yoolasha iyo himilooyinka horumarineed ee ay hiigsanayso xukuumada DDSI kuwooda dheer, dhexe iyo kuwa dhaw, waa in la helo cudud shaqaale oo ka madax banaan musuq maasuq, nin jaclaysi, eex, qabyaalada iyo dulsaarnimo islamarkaana ay ka go’antahay gudashada waaji’daabkooda shaqo iyo hirgalinta qorshayaasha horumarineed.
Haddaba iyada oo ay maalmahanba ka socotay xafiisyada heer deegaan shirar lagu qiimaynayo xubnaha aas aasiga ah ee XDSHSI taasi oo shaqsi kasta diirada lagu saarayo sida uu ku yahay gudashada waajibaadkiisa shaqo iyo in la ogaado shaqaalaha qaybahooda qaabdhismeedka unug aas aasiyada, unug hoosaadyada iyo xubnaha XDSHSI sida ay u shaqeeyaan.
Sidaasi darteed ayaa wakaalada qurba joogtu maanta u qabatay shaqaalaha wakaalada shir lagu qiimaynayo aas aasiyada, unug hoosaadyada XDSHSI.
Shirkan ayaa waxaa furitaankiisii ka hadlay wasiir ku xigeenka qurba joogta DDSI mudane Bashiir Maxamed Cabdilaahi wuxuuna ka warbixiyay ujeedada iyo ahmiyada uu leeyahay shirkani isaga oo si durugsan uga waramay jihooyinka horumarineed ee uu ku socda XDSHSI.
Wuxuuna wasiir ku xigeenku sheegay in sanadihii ugu danbeeyay XDSHSI guulo waawayn ka soo hooyay dhinacyada horumarka nabadgalyada iyo maamulka suuban sidoo kalena dhanka xidhiidhka qurba joogta ka soo hooyay guulo u horseeday deegaanka horumar xawliya.
Wuxuuna sheegay wasiirku in shirkan qiimanta ah mudada uu socdo shaqaalaha shaqsi kasta diirada lagu saaridoona sida uu ku yahay dhinacyada shaqo gudashada ladagaalanka musuqa eexda nin jaclaysiga iyo heerka uu taagan yahay ka go’aanshaha shaqada iyo waliba qaab dhismeedka unug aas aasiyada XDSHSI ee shaqaalaha wakaalada.
Dhankooda shaqaalaha wakaalada ayaa soo dhaweeyay shirkan shaqsi kasta diirada lagu saarayo, kuwaasi oo sheegay in ay tahay dar dargalinta hawlaha shaqada iyo ka midho dhalinta qorshayaasha horumarineed.